Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Nandray ny sidina Air France vaovao i Sunny Seychelles
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Seychelles mandray an'i Air France hiverina
Noarahabaina tamin’ny alalan’ny “water canon” nentin-drazana rehefa tonga tao amin’ny Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Seychelles, ny kaompaniam-pitaterana nasionaly frantsay, Air France, dia nandray tsara ny fiverenany teto amin’ny firenena nosy ny marainan’ny alahady 24 oktobra 2021, taorian’ny 18 volana. hiatus.
Niarahaba ny fiverenan’ny Air France eto amin’ny firenena nosy ny delegasiona avy any Seychelles.
Nesorina tao amin’ny lisitra mena an’i Frantsa i Seychelles, ary heverina fa hampitombo ny fahatongavan’ireo mpitsidika izany.
Hanampy amin'ny fanatsarana ny fipetrahana tsy amin'ny hotely ihany koa izany, fa amin'ny trano fandraisam-bahiny kely kokoa sy trano fandraisam-bahiny ary hitondra mpitsidika bebe kokoa any Praslin, La Digue, ary ireo nosy hafa.
Ireo vahiny 203 nanidina avy any Frantsa tamin'ity sidina voalohany ity dia nomena tsiron'ny fampiantranoana kreôla rehefa nahazo fahatsiarovana avy any an-toerana izy ireo. Departemantan'ny fizahan-tany ary niaina ny fanahin'ny Seychellois tamin'ny alàlan'ny mozika nentim-paharazana mivantana.
Ho fahatsiarovana ny fiverenan’ny fifandraisana mivantana ny firenena nosy amin’ny iray amin’ireo tsena nentim-paharazana fototra, sy ny fametrahana an’i Seychelles ho “Liste Orange” nankatoavina ho an’ireo mpivahiny frantsay, dia nisy delegasiona ahitana ny minisitry ny Raharaham-bahiny sy ny fizahantany, Andriamatoa Sylvestre. Radegonde; ny masoivoho frantsay, Andriamatoa Dominique Mas; Sekretera lehiben'ny fizahantany, Ramatoa Sherin Francis; ary ny tale jeneralin’ny varotra toerana, Rtoa Bernadette Willemin no tonga nitsena ny fahatongavan’izy ireo.
Naneho ny heviny Ramatoa Willemin fa ny fanesorana an’i Seychelles ao anatin’ny lisitra mena ao Frantsa sy ny fiverenan’ny Air France dia tsy vitan’ny hoe hampiroborobo ny fahatongavan’ireo mpitsidika, fa hanampy amin’ny fanatsarana ny fipetrahana tsy amin’ny trano fandraisam-bahiny ihany, fa amin’ireo trano fandraisam-bahiny kely kokoa sy toeram-pikarakarana tena ary koa. mitondra mpitsidika bebe kokoa any Praslin, La Digue, ary ireo nosy hafa.
“Fotoana lehibe ho an'ny toerana halehantsika ny fiverenan'ny Air France eto amin'ny morontsiraka. I Frantsa dia mijanona ho tsena izay mandeha tsara ho antsika na dia eo aza ny tsy fisian'ny sidina mivantana sy ny hoe tafiditra ao anaty lisitra mena isika. Miaraka amin'ny fisian'ny sidina mivantana mankany Seychelles manomboka anio, dia maminavina ny tsenan'i Frantsa fa tsy ny fahatongavan'ireo mpitsidika ihany fa ny famerenana indray ny toerany amin'ny tsena telo voalohany. "
Tsara ny fijery, hoy Ramatoa Willemin. “Faly izahay fa ireo sidina enina voalohany dia manantena ny enta-mavesatry ny mpandeha ary miaraka amin'ny tatitra avy amin'ireo mpiara-miombon'antoka ara-barotra frantsay, izay nanatsara ny fampiroboroboana ny toerana halehany, fa salama sy tsara tarehy ny famandrihana ho any Seychelles. Ny mpandraharaha ara-pizahantany eto an-toerana, indrindra ireo orinasa madinika sy any amin’ireo nosy ankoatry ny Mahé, dia nalahelo ireo vahiny frantsay ary ho faly mandray azy ireo indray.”
Nambaran’ny Masoivoho Dominique Mas fa hanampy amin’ny fanamaivanana ny olana ny fananana fifandraisana mivantana dia ny mpandeha mankany Seychelles.
"Ny fanatsarana ny toe-pahasalamana ao amin'ny firenena roa tonta dia tena nanampy tamin'ny famerenana indray ny dia eo anelanelan'i Frantsa sy Seychelles. Ny fanapahan-kevitra hametraka an'i Seychelles ao amin'ny 'lisitra voasary' sy ny fahatongavan'ny Air France androany dia mamerina ny fahatokisan'ny governemanta roa tonta amin'ny fampandehanana tsara ny fepetra fiarovana azy ireo. Faly izahay manana sidina mivantana miverina avy ao amin’ny seranam-piaramanidin’i Paris Charles De Gaulle satria mora kokoa ho an’ny mpitatitra frantsay ny mankany Seychelles”, hoy ny masoivohon’i Frantsa.
Seychelles, izay niverina tamin'ny hetsika fampiroboroboana ara-batana tamin'ny volana septambra, dia nandray anjara tamin'ny fampirantiana Top Resa 2021 IFTM, iray amin'ireo tsena iraisam-pirenena lehibe natokana ho an'ny fizahan-tany any Frantsa, hoy Ramatoa Willemin. “Fotoana nampanantenaina ho anay ny IFTM Top Resa satria nahatsikaritra ny fahalianana vaovao amin'ny toerana halehanay izahay ary namela anay hampitombo ny fahitanay ny haino aman-jery any Frantsa.”
Seychelles dia nahitana mpitsidika 43,297 tonga avy any Frantsa tamin'ny taona 2019, ka izany no tsena faharoa ambony indrindra ao amin'ny firenena tamin'io taona io. Hatramin'ny taona 2021, mpitsidika 8,620 avy any Frantsa no nandeha tany amin'ireo nosy ireo. Miaraka amin'ny fiverenan'ny Air France, zotram-piaramanidina 11 izao no tompoin'i Seychelles.